Magnetic Resonance kuri Technologists Job Description / Duty Mharidzo And rutina – JobDescriptionSample.org
musha / Uncategorized / Magnetic Resonance kuri Technologists Job Description / Duty Mharidzo And rutina
superadmin Chikumi 28, 2016 Uncategorized 2 Comments 1,424 Views
Unoshanda Resonance kuri (MRI) mifananidzo. Monitor murwere chibatiso uye nyaradzo . Zvinogona dzinoshandura gadolinium musiyano chipimo chemushonga nomutsinga. On kudzokorora mira MRI dzinoshandiswa, akatsanangura anogona kubvunzurudza munhu, uye nzvimbo murwere. Kupinda kombiyuta mashoko akadai murwere nhaka, kunangiswa wainyatsotaura, zvoutachiona munzvimbo kuva tarisa, uye nzvimbo kupinda.
Namira vasiri Tracking kunotungamirira suffereris ruoko, mutumbi, chiuno chomusikana, kana zvimwe nhengo dzomuviri.
Chinja magineti resonance kuri (MRI) chikwata kana peripheral Hardware.
Mufambiro kuongorora Bvunzurudzo vanhu kuziva contraindications, somuenzaniso ferrous zvinhu mavharuvhu kuti vari prosthetic pacemakers .
Zvibereko negadziriro yeparutivi makopi mapikicha kuburikidza chokutamisira Graphics kubva kombiyuta workstation kana okuchengetera zvenhau.
Kuvaka kana zvimwe kuti mufananidzo Data kuti rinobva resonance mifananidzo.
Tsanangura magineti resonance kuri (MRI) nzira kuvanhu, Distributors kuti muri munhu, kana nhengo mhuri.
Pinza nomutsinga siyanisa mavara, akadai Somuenzaniso gadolinium musiyano, pamwe marongero kudzidzira zvichienderana.
Check mifananidzo chokuita rakaisvonaka, utilizing kamera uye rinobva resonance kudzivirira namano.
Kuita Magnetic Resonance kuri (MRI) scanners.
kana achida, kuitira zvakakodzera nzvimbo immobilization dzakabatana kuva, zvakabatanidzwa nopokuti kutambura ari munhare.
Supply earplugs kana headsets kune vanhu kuti vavandudze vakasununguka uye ezasi manzwi kuti zvinotambudza.
Pick madenderedzwa kana zvakakodzera kuri nzira kuti mifananidzo kuti zvinodiwa.
Disposal zvinokunetsa kunzwisisa chokuita rinobva resonance kuri (MRI) muverengi kana peripheral zvinhu, kusanganisira dzokurinda kana madenderedzwa.
Inventories kuti mufambiro kuti ainyatsoshandisa kuramba ndiri nezvinhu zviri dzokurapwa.
Rayira zveutano chikwata kana vadzidzi vari rinobva resonance kuri (MRI) nzira kana midziyo nzira.
Kushanda Manyiminya nzira torazve simba magineti resonance kuri (MRI) mifananidzo, semuenzaniso hunoshanda pfungwa-kuri, -Chaiyo nguva muviri inofamba-Tracking, kana zvetsandanyama nemapfupa sezvamunoita uye ndege Visualization.
Kudiwa sedatives kana zvimwe zvinodhaka kubva vanachiremba vanhu nokutya kana claustrophobia.
Funga zvinyorwa pfupi kuti vari kurapwa kubva varwere.
Ongorora magineti resonance kuri (MRI) zvishandiso kuti zvimwe uchishandisa kwakakodzera uye kunyatsoshanda maererano nezvinodiwa.
Gadzira zviziviso kuti ipe nyaya vanoongorora pezvakaitwa kana zvaitika maererano vanachiremba kana siyana nyanzvi dzokurapa kana nemishumo.
Kubatanidza zvoutachiona chinowedzera chaivo kutenga mubato (Pac) zvinogadzirwa.
Chinzvimbo uye akadzivirira zvishoma, moveable rinobva resonance kuri (MRI) vaverengi ari muviri chikamu kuva imaged, akadai ruoko, ibvi, kana kuenda.
Plan Misangano chokuita kuongorora nyaya kana vatengi vari zvekuchipatara.
Task Zviito Vanoda
Kuverenga Kunzwisisa-Understanding anoumbwa ndima nemitsetse mapepa nebasa.
Active Kuteerera-To chii nevamwe vanhu vanoti kugovera kuteerera yose, achitora nguva kuziva zvinokonzera vari kugadzirwa, kubvunza mibvunzo sezvo akanaka, uye kwete stifling pane nguva kuti vari kukodzera.
Kubudisa-Kutaurirana zvakanyanya mune zvokunyora kwete sokuita kuti zvinodiwa mumusika.
Chatting-Kutaura nevamwe kutaura mashoko zvinobudirira.
Math-Kushandisa pamasvomhu yokugadziridza nyaya.
Science-Kutaura unyanzvi uye nemirayiro rwokugadzirwa kugadzirisa matambudziko.
Criticalthinking-Kushandisa pfungwa uye akafunga kuti kusvibisa kubatsira zvinongoitika zvomurume humwewo mikana, zvabuda kana nzira nyaya.
Active Kudzidza-Kunzwisisa zvinorehwa mashoko matsva vose ramangwana uye chipo matambudziko zvokuita uye.
Kudzidza Strategies-tichinhonga kushandisa educationORtutorial nzira uye pezvakaitwa hunokodzera dambudziko tichidzidzisa kana apo kudzidza zvinhu zvitsva.
Monitoring-OverseeingPERDiscovering chokupika masangano, mamwe vanhu, kana uchida funga remedial chiito kana kuti kusika enhancements.
Social Perceptiveness-Kuziva othersA mhinduro uye achiziva nei ivo vanoita nekuti vanoita.
Kunyengetedza-Kuvanyengetedza vamwe kuchinja miitiro kana vavo vakachenjera.
Kukurukurirana-Kutora vamwe pamwe chete uye kuedza ayananise variances.
Achirayiridza-achirayiridza vamwe HOWTO kutora matanho.
Company zvevhiki-Nemwoyo kuedza kuwana nzira yokubatsira vanhu.
Complex matambudziko Kuziva matambudziko akaoma uye kudzokorora akakodzera Data dzika zvavanogona uye kugadzira uye kuyera pazviridzwa.
Mabhizimisi Research-Kudzidza zvinodiwa uye chigadzirwa zvinodiwa kuti pave manyorero.
Engineering Design-Kuva mano kana urwu uye zvigadzirwa kubatsira mushandisi kunoda.
Tools Selection-Kuona maturusi uye mhando midziyo vaifanira kuuraya basa.
Yakavamba-kugadzwa mafomu, michina, waya, kana midziyo kugutsa zvinodiwa.
Zvirongwa-Writing ekombiyuta nokuda mafomu zvakasiyana.
Rinoshanda Tracking-Vanochengeta foni, gauges, kana zvairatidza siyana kuva nechokwadi chinhu midziyo anoita zvinobudirira.
Operations Nemaderedzerwe-Kugadzirisa nzira nzira kana namano.
Maintenance-vaiwanzouraya netsika kugadzira maturusi uye kusarudza apo.
Troubleshooting-Kuona zvinhu shure zvikanganiso kuti vari kushanda uye vachisarudza zvokuita nezvazvo.
Repairing-Vachigadzira mano kana mienzaniso kushandisa midziyo vari kutsvakwa.
Quality Kuzvidzora Yekuongorora-Kuita mazano uye miedzo zvinhu, zvingaitwa, kana akavhiyiwa kuongorora unhu kana functionality.
View uye Decisionmaking-Kufunga zvikomborero uye kwakafanana mari inobvira mabasa kusarudza kupfuura rakakodzera mumwe.
Analysis-Kuona sei chirongwa vanofanira kushanda uye kuti kuchinja panovira, akavhiyiwa, uyewo matambudziko anogona tinzwe zvaitika.
Nzira Analysis-Kuona nzira kana zviratidzo hurongwa kuita uyewo maererano vavariro wegadziriro, akakodzera kana kuti zviito vaifanira kusimbisa waivako.
Timemanagement-Kudzora nguva vamwe uye kwomunhu pachake chiitiko.
Administration Mari Kuziva sei mari anogona kuitwa kuti basa rinoitwa, uye rokutengesa maererano havashandisi mari idzi.
Management pamusoro Product Resources-Kucherechedza uye kuwana kuti kushandiswa kwakarurama zvinhu, midziyo, uye zvinhu zvinodiwa kuita zvikuru mashandiro.
Administration revashandi Resources-Kuumba, kusaidzirana, uye vaitungamirira vanhu nokuti unoshanda, kuziva zvakanaka vanhu kuti basa renyu.
Education Kukosha Knowledge Kukosha
Affiliate kuti Stage (kana mamwe 2-Yr dhipuroma)
Basa Authority Unyanzvi Qualification
Madambu / Work – %
danho rekutanga – %
Social nemunhu – %
Stress Kushivirira – %
Nezvemabasa Depth – %
utsanzi – %